laacib » Manchester City Oo War Soo Saartay Xilli La Sheegayo In Laga Mamnuucayo Champions League
Manchester City Oo War Soo Saartay Xilli La Sheegayo In Laga Mamnuucayo Champions League
Manchester City ayaa dib isaga weerartay wararka sheegayay in hal xilli ciyaareed laga mamnuucaya tartanka Champions League ka dib markii ay ku xadgudbeen sharciga dhaqaale wanaaga kooxaha Yurub.
City ayaa waxaa baaritaan ku wada guddiga koontaroola dhaqaalaha kooxaha Yurub ka dib markii dukumiintiyadoodii dhaqaalaha ay si sir ah ku heshay Football Leaks.
Manchester City ayaa isbuucaan ogaan doonta natiijada kulanka ay yeesheen guddiga koontaroolka dhaqaalaha kaasoo ka dhacay Switzerland labo isbuuc ka hor.
Jariirada Mareykanka ee New York Times ayaa sheegtay in guddigaan ay u sii jeedin doonaan UEFA in Manchester City laga mamnuuco Champions League muddo hal xilli ciyaareed ah.
Manchester City ayaa warbixin ay soo saartay goordhaweyd kaga hadashay arintaan, waxaana ay ku celceliyeen inaysan wax qalad ah sameynin halka ay sidoo kale eedeeyeen guddiga baaritaanka wada oo ay sheegeen inay balan ka bax sameeyeen.
Warbixinta City ayaa u qorneyd sida tan: “Mancheser City waxa ay si niyad wanaag ah u la shaqeyneysaa guddiga koontaroola dhaqaalaha kooxaha Yurub ee baaritaanka socda.
“Madaama aan sidaas sameyneyno waxaan ku tiirsanahay shaqada guddiga iyo balantii UEFA ay inaga qaaday 7dii bishii March oo aheyd inaysan ka hadli doonin arintaan inta uu baaritaanka socdo.
“In Jariirada New York Times ay warbixinteeda u soo xigato dad ku dhow dhow kiiska waxa ay nagu abuureysaa walaac.
“Waa labo arin midood in aaminadii ay Manchester City ku qabtay guddiga la buriyay ama inay jiraan shaqsiyaad guddiga ku jira oo doonaya inay dhaawacaan sumcada kooxda iyo ganacsigeeda ama waaba labada.
“Eedeynta la xiriirta inaan galnay danbe dhaqaale waa been gabi ahaanba, cadeyntana waxaan u gudbinay guddiga.”